အယ်ဖိုး: July 2010
Cool Edit Pro2.1
ဒါကတော့ Cool Edit Pro 2.1 လေးဖြစ်ပါတယ် ဒီဆော့လ်ဝဲက Audio Edit လုပ်တဲ့ ဆော့လ်ဝဲလေး ဖြစ်ပါတယ် အစ်ကို တစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကို တောင်းထားတာ ကြာပါပြီး ကျွန်တော် မအားလို့ ခုမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ စာဖတ်သူတွေလဲ Audio Edit ကို လေ့လာချင်တဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ ရှိရင်ရှိမှာပါ အဲ့ဒါကြောင့် အားလုံး လေ့လာနိုင်အောင် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အချိန်မရှိလို့ အသုံးပြုနည်း အပြည့်အစုံး မရေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ အဆင်ပြေပါစေ။ 34.62mb
Posted by Peace at 9:04 PM0comments Links to this post
Ultimate Boot CD (UBCD) 5.0.2လေးကတော့မထင်မှတ်ဘဲ PC ကWindowကျသွားလို့ Disk C မှာဝင်နေသောဥပမာ Deskop မှာကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တစ်ခုကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုProgramလေးကိုဒေါင်းယူပြီး CDထဲမှာCopyလုပ်ထားပြီး စက်ထဲထည့် Bootတင် Run လိုက်ရင် အရေးပေါ်အနေဖြင့် ၀င်းဒိုးပွင့်လာပြီး Disk Cမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကူးယူချင်တဲ့ဖိုင်ကို ကူးယူပြီးဖြေရှင်းနိုင်တာပေါ့ လိုချင်တယ်ဆိုရင်
Win RAR (2010)
Win RAR ဖိုင်တစ်ချို့ဟာ file floder နဲ့မဟုတ်ဘဲ Win RAR
နဲ့ရှိတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ် လုပ်တဲ့ညီတော်နောင်တော်တွေသိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် နောက်ပြီးစက်ထဲမှာရှိသင့်တဲ့ Program လေးတစ်ခုလဲဖြစ်လောက်မယ်ထင်တယ် Win RAဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Win RARကအတော်အသုံးဝင်တယ်လို့ဆိုတော့ Win RAR ဖိုင်နဲ့လာတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖွင့်လို့ရအောင် ဒေါင်းလုပ်ယူပြီးသုံးပြုဖို့အကြုံပြုလိုပါတယ်
Download Win RAR (2010)
ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်ကလေး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်သွားလို့ ဖိုင်တွေ အားလုံး ပျောက်သွားသလား။
မှားပြီး ဖော်မတ်လုပ်မိလို့ ဖိုင်တွေပျောက်သွားသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီဆော့ဝဲနဲ့ ပြန်ရှာရင်
Data Doctor Recovery Pen Drive လို့ အမည်ရတဲ့ ဒီဆော့ဝဲက PenDrive
အပြင် Memory Card တို့လို Storage မျိုးစုံအတွက်လည်း အလုပ်လုပ်ပေးပါမယ်။
mediafire link(download 1.08mb)
အင်စတောတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပါဘဲ။ open လုပ်ပြီး next တွေကို ကလစ်လုပ်
သွားပါ။ အင်စတော ပြီးသွားရင် Serial box ပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ ပေးထားတဲ့
Name, Key တွေကို မှန်အောင်ဖြည့်ပါ။ အခြား email တို့လိုကိုတော့ ကြိုက်တာဖြည့်
နိုင်ပါတယ်။ အိုကေလုပ်ပြီးရင် စသုံးလို့ ရပါပြီ။
Posted by Peace at 4:11 PM0comments Links to this post
Power MP3 Cutter _V 5.0 (patch)
mp3 (audio) သီချင်းဖိုင်တွေကို ဖြတ်တောက်တဲ့ Software လေးပါ ..
trial version ဖြစ်တဲ့အတွက် software ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် byte-patcher.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Window Drive:\_Program Files\_Cooolsoft\_Cutter
ထဲထည့်ပြီး ထုံးစုံအတိုင်း Patch ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် unlimited အသုံးပြုလို့ရပါပြီ ..
( Patch သွားပေးမထားရင် သီချင်းတွေကို 30 စက္ကန့်ထက်ပိုဖြတ်လို့မရပါဘူး )
အသုံးပြုပုံအကြမ်းဖျင်းကတော့ ကိုယ်ဖြတ်တောက်ချင်တဲ့ သီချင်း mp3 (audio) ဖိုင်ကို open file မှတစ်ဆင့် သွားရွေးပြီး
ဖွင့်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် ကိုယ်ဖြတ်တောက်ချင်တဲ့ နေရာကို mark all , mark start , mark end တွေကို အသုံးပြုပြီး select လုပ်ပါ .. ( pointer နဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကို selete လုပ်လည်းရပါတယ် ) select လုပ်ပြီးရင် for selection ဆိုတဲ့အတွင်းထဲက play , pause .... etc.. တွေနဲ့ဖွင့်ပြီး ဖြတ်တောက်ဖို့ select လုပ်ထားတာတွေကို မှန်မမှန်လည်း ပြန်စစ်လို့ရပါတယ် .. အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင် cut now ကိုနှိပ်ပြီး save လို့ရပါပြီ ...
save လို့ရတဲ့ format file type တွေကတော့ mp3 , wav ,wma, ogg, ape တွေပါပဲ ..
Posted by Peace at 9:41 PM0comments Links to this post
Talking Desktop Clock 1.0.3
Destop ပေါ်မှာ သွားနေတဲ့ နာရီ Software လေးပါ .. :-)
နာရီ ကို Destop ပေါ်မှာ အကြည်လေး ( Transparent ) လည်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ် .. ..
နာရီအပေါ် Pointer လာထိရင် ပြေးနေအောင်တို့ ၊ Fades in / Fades out ဖြစ်သွားအောင်တို့လည်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ် .. ..
၁၅ မိနစ် (or) မိနစ် ၃၀ (or) ၁နာရီ ထိုးတိုင်း စိတ်ကြိုက် အသံမြည်အောင်လုပ်ထားလို့ရတဲ့အပြင် ဘယ်နှစ်နာရီထိုးကြောင်းကို ကာတွန်းရုပ်လေး ထွက်လာပြီး စကားပြောအောင်လည်း လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဗျာ ..
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ ဒေါင်းစေဗျာ .....
Posted by Peace at 9:37 PM0comments Links to this post
Make Your Window XP Logon Screen Look Like Window Vista
window xp logon screen ကို window vista ultimate ပြောင်းရအောင် ။ အရမ်းလွယ်ကူစွာပြောင်းနိုင်ပါတယ် ။
ပြောင်းဖို့ တော့ software တစ်ခုတော့ လိုတယ် ။ သေးသေးလေးပါ ။
Logon Studio software ပါ ။ install လုပ်လိုက်ပါက အောက်ပါပုံအတိုင်းရလာပါလိမ့်မယ် ။
ပြီးရင် vista ultimate logon screen download ချပါ ။
ပြီးပါက logon Studio ထဲက Load ကိုနှိပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ vista ultimate screen ကို ရွေးလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် OK ပေါ့ဗျာ ။
တကယ်လို့ vista ultimate logon screen ကိုမကြိုက်ပဲ အခြား logon screen ကိုကြိုက်ပါက အောက်မှာ လင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Posted by Peace at 9:01 PM0comments Links to this post
Portable ဆိုတာမျိုးဟာ မိမိကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး .. Flash drive မှာပဲ ဒီ program လေးကို သိမ်းထားပြီး ကြိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာ သွားထိုးပြီး သုံးလို့ရပါတယ် .. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ portable ဟာဆိုရင် အခုဆို အတော်လေး နေရာယူလာတာတွေ့ရပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် computer မှာ run စရာမလိုဘဲ ကိုသုံးချင်တဲ့ program ကိုသုံးနိုင်တယ် .. နောက်တစ်ချက်က Program အကြီးလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ဆိုက်မရှိပဲတာပါပဲ .. ကဲအောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ ..
Download Rapidshare ၊ Megaupload
password တောင်းရင် " www.theviperfiles.com" ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ .
Posted by Peace at 6:16 PM0comments Links to this post
1CLICK DVD Converter 2.1.6.3
WinApp | 1CLICK DVD Converter 2.1.6.3 | 8.34 Mb
Posted by Peace at 6:10 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 6:03 PM0comments Links to this post
ဒါကတော့ ညီလေး တစ်ယောက်က Excle password recover software တောင်းထားလို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒါက Excle တစ်မျိုး မကပါဘူး Office File တော်တော်များများ password recover လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါကြောင့် စာဖတ်သူတွေလဲ လိုရင် ယူသုံးလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲ မအားလို့ ပိုစ်မတင်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီး ကဲညီလေးရေ ဒါလေးနဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေမယ်လို့ တင်ပါတယ် လိုချင်ရင် အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေ။ 2.77mb
Download ifile | Download mediafire
Posted by Peace at 1:48 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 10:25 PM 1 comments Links to this post
Image Format ပြောင်းဖို့အတွက် Photoshop တို့ကို သုံးဖို့ မလိုဘဲ Image တွေကို Right Click လုပ်ပြီး တိုက်ရိုက်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Right Click Image Converter ပါ။7MB ရှိတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလုတ် ပြီး စက်ထဲ အင်စတော ထည့်သွင်းပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ Image တွေကို Right Click လုပ်ရုံနဲ့ ဖော်မတ်ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
JPGE, BMP, GIF, PNG, ICO (favicon), TIF အပြင် အခြား ဖော်မတ်တွေလည်း ပြောင်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Posted by Peace at 7:45 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 11:54 AM0comments Links to this post
သင့်ရဲ့မျက်နှာကို window password အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Luxand Blink software
သင့်ကွန်ပျူတာကိုစဖွင့်မည်ဆိုလျှင် power ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ window က loading လုပ်ပြီး၊ သင့်ကို password နှင့် log in လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ
သင့်ရဲ့ user name ကိုရွေးပြီးတော့ သင့် password တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီး log
in လုပ်ရပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ရိုက်ထည့်သော password ကမှားနေပြီဆိုလျှင် windowကပွင့်မှာမဟုတ်သလို၊ အဆင်မသင့်လျှင် service center ကိုပြေးရပါမယ်။ ယခုတင်ပြမယ့် ဆော့(ဖ်)ဝဲကတော့ မည်သည့် password ကိုမှရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲ၊ သင့်မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ သင့်ကွန်ပျူတာက သင့်ကို log in လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Face recognition လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီ Luxand Blink
software ကို install လုပ်ပြီး၊ run at window startup ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်
သင့် window ဖွင့်တိုင်းမှာ password များကိုရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲ
သင့်ကွန်ပျူတာ web cam ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သင့် window ကပွင့်သွားမှာပါ။ User တစ်ယေက်ထက်ပိုပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ history ကိုပြန်ကြည့်လို့ရသလို၊ အခြားသူတစ်ယောက်က log in လုပ်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ fail ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း၊ ထိုသူရဲ့မျက်နှာကို သင့် web cam မှမှတ်တမ်းတင်ထားမှာပါ။
Luxand Blink exe file ကို download လုပ်ပြီးလျှင် run ပါ။ ပြီးလျှင် သင်အသုံးပြုမယ့် web cam ကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းဆော့(ဖ်)ဝဲ၏ အကူအညီနှင့် Configure တစ်ခါတည်းလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Install လုပ်သည့်အချိန်မှာ Configure မလုပ်ခဲ့ပါလျှင် task bar မှာရှိတဲ့ Luxand Blink icon ပေါ်မှာ right click နှိပ်၍ setting ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် register my face မှာ Remember ရွေးပြီးလျှင် သင့်မျက်နှာကို register လုပ်ပါ။ Register လုပ်ရာမှာ သင့်မျက်နှာကို ဘေးဘယ်ညာသို့ ဝဲပြီးသင့် web cam ကိုမှတ်မိအောက်ပြပါ။ ပြီးလျှင် save လုပ်ပါ။ ထို့နောက် Enable ကိုနှိပ်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ နောက်တစ်ကြိမ် သင်ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်တာနဲ့ သင့် password ကိုရိုက်စရာမလိုပဲ၊ သင့်မျက်နှာကို web cam မှာကြည့်တာနဲ့
သင့်ကွန်ပျူတာက log in လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ window7နှင့် Vista
Posted by Peace at 11:10 AM0comments Links to this post
မင်္ဂလာပါဗျာကျနော်ကြိုက်တဲ့ Typing Tutor လေးကို သူငယ် ချင်းများလည်း နှစ်သက်မယ် ထင်လို့ ဝေမျှလိုက် ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက် 20 MB ကျော်လေးဘဲ ရှိပါတယ်။ အင်စတော လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဇစ်ဖိုင်ကို ဖြည်ပြီး ရလာတဲ့ ဖိုလ်ဒါထဲမှာ TTUTOR10.exe ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ရုံပါဘဲ။မူရင်း ၀ဘ်ဆိုက်ကတော့ ဒီမှာကလစ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ပါ။ ၀ယ်သုံးမယ်ဆိုရင် 16 USD ပါ။မ၀ယ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီမှာကလစ်ပြီး ဒေါင်းလုတ်ယူလိုက်ပါဗျာ။
Posted by Peace at 4:18 PM0comments Links to this post
File Format Converter ကို install ထည့်သွင်းထားပြီးရင် office 2007 ဖိုင်ကို office 2003 ကနေ တိုက်ရိုက် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ဂူဂဲလ်မှာ ရှာပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှာမတတ်သူတွေအတွက် ကတော့ ဒီမှာကလစ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ။
Posted by Peace at 4:17 PM0comments Links to this post